ဖက်ရှင် Relay 2015 ပြီးစီးခဲ့ပြီး, နှင့်အထင်ရှားဆုံးဒီဇိုင်နာများနွေဦး-နွေရာသီရာသီ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့ collection များကိုပြသခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အဘယ်သူမျှမသစ်ကိုစတိုင်များ, အရောင်များ, silhouette ပွုပါပွီနိုင်ဘူး။ ဒါဟာသူ့ရဲ့လက်ရှိဝတ္တုမှဖြည့်စွက်, ဗီရိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်အချိန်ရဲ့ဆိုလိုတာကမကြာမီထိုအ stylist ဆုံးဖြတ်ချက်များ rastirazhiruyut အစုလိုက်အပြုံလိုက်-စျေးကွက်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပဲရစ်မှာတစ်ဦးဖက်ရှင်ရှိုးမှာ 2015 ခုနှစ်, မိမိတို့ collection များကိုပေးအပ်သည်များစွာသောဖက်ရှင်အိမ်များ, ဒါပေမယ့်အပူဆုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းဝေဖန်မှုများ Valentino မှာငါးဖမ်းကြကြောင်းဌာနက Louis Vuitton , Chanel, အလက်ဇန်းဒါး McQueen က Givenchy ၏။
ငွေကောက်ခံ Valentino ။ တစ်လောကလုံး digital နှင့် Computerized ၏ခေတ်, ဖက်ရှင်အိမ်၏ဒီဇိုင်နာများသည်နှင့်အညီ, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်လွှမ်းလေ၏။ အိပ်မက်ကိုမြင်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သော Romantic ကန့်သတ်ခံစားရဖို့ရှိသည်။ သူတို့နှင့်အိမ်သူအိမ်သား Valentino ဇာ, ပန်းနှင့်အင်္ဂလိပ်ရင်ခုန်စရာ pastel ရိပ်၏စည်းစိမ်ကိုထိခိုက်နွေဦးနဲ့နွေရာသီအဝတ်တစ်ဇိမ်ခံစုဆောင်းခြင်း, ဖန်တီးရန်အဘို့အဒါဟာဖြစ်ပါတယ်။ အလျှော့ဣတ္!
Chanel စုဆောင်းခြင်း။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ, ပဲရစ်မှာမြင့်မားတဲ့ဖက်ရှင် Chanel ဒီဇိုင်နာများ ထား. , 2015 မျှခြွင်းချက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကဲ့သို့, ကားလ် Lagerfeld, ဖက်ရှင်အိမ်၏ဒီဇိုင်နာများ၏ဖန်တီးမှုအဖွဲ့အကြီးအကဲအေဘယ်တွိနှင့်အတူစမ်းသပ်နေပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းများ၏အနက်ကိုအဘယ်သူမျှမရှည်အသစ်အဘယ်အရာကိုမျှမသယ်ဆောင်သည်ဟုထင်ရပေမယ့် 2015 ခုနှစ် Lagerfeld, ထိတ်လန့်အသုံးပြုကြသည်ကြောင်းမိုနိုခရုမ်ထုတ်မယ်လို့! ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, Chanel 2015 ခုနှစ်တွင်ယင်း၏တည်ရှိမှု၏သမိုငျးတှငျအမြားဆုံးပြောင်းလဲနေသောနှင့်လက်တွေ့စုဆောင်းခြင်းကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
Louis Vuitton ၏စုစည်းမှု။ ပြောင်လက်တောက်ပသောအရောင်များ, သဘာဝသားရေ, စကင်ဒီနေးပုံနှိပ်နှင့်စုံစုံ silhouette ၏စည်းစိမ် - သင်ခေတ္တ Louis Vuitton ၏ဆောင်းဦး-ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလစုဆောင်းခြင်းကိုဖော်ပြရန်နိုင်အောင်။ အဖြူရောင်ရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာ, ပင်လယ်တောက်တောက်လိုက်မီးထိုး - 2015 ခုနှစ်ပဲရစ်ဖက်ရှင်ရှိုးသင့်လျော်သော setting ကိုကျင်းပခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့, ချမ်းရာသီ, ဒီဇိုင်နာများတောက်ပသောအရောင်အဆင်းအတွက်ခြယ်ခံရဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်။
ငွေကောက်ခံ Givenchy ။ ဆောင်းဦး-ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလရာသီ၏ဖက်ရှင်အိမ်သူအိမ်သား Givenchy အရောင် palette ဝိသေသ, မပြောင်းလဲထားခဲ့တယ်။ သို့သျောလညျး, အနက်ရောင်အညိုရောင်နှင့်မီးခိုးရောင်ကြည့်မူရင်းအသစ်တစ်ခုအနက်တွင်။ ဒါဟာအရည်ရွှမ်းပစ္စည်းများ splash နှင့်အတူဒဏ်ငွေထုတ်ကျေးဇူးတင်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ အသစ်ကအသက်ကိုပေးတော်မူမီဒီအရှည်ဆင်မြန်း, အင်္ကျီနှင့်ပျင်းရိ, "ငှက်ပျောသီး" ၏ဆင်တူ။
အလက်ဇန်းဒါး McQueen က၏စုစည်းမှု။ အဆိုပါလူထူးလူဆန်းအဖိုးကြီးဒီဇိုင်နာက၎င်း၏အခြေခံမူကနေသွေဖည်မလစျြလြူရှုမည်သူမဆိုစွန့်ခွာမည်မဟုတ်ကြောင်းဇိမ်ခံ flamboyant ဆင်မြန်းဝတ်ဆင်မိန်းကလေးငယ်များကိုဆက်ကပ်။ လက်ရာမြောက်သောပန်း, အမွေး, မြိတ်, မျိုးစုံအလွှာ flounces နှင့်ရိုးရှင်းသော၏ပဒေသာ - အလက်ဇန်းဒါး McQueen ကစုဆောင်းမှုအများဆုံးပိုင်းခြားသိမြင်ဖက်ရှင်အထင်ကြီးမည်!
ငွေကောက်ခံ Stella McCartney ။ Stella McCartney တစ်ဦးမိုနိုခရုမ်စတိုင်နှင့်အတူစမ်းသပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ပါရမီဒီဇိုင်နာများအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအဆိုပါမော်ဒယ်များလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်ကြော့ဖြစ်ကြသည်။ ဖြောင့် silhouette, သန့်ရှင်းလိုင်းများ, အနည်းငယ်မျှသာပုံစံမျိုးကိုသင်ရိုက်ချင်ကြပါဘူးတဲ့ "ဒုတိယအသားအရေ" ၏တစ်နည်းဖန်တီးပါ။
ငွေကောက်ခံ Chloe ။ ဒီဇိုင်နာများအတွက်, ဖက်ရှင်အိမ်သူအိမ်သား Chloe အအေးရာသီလေယာဉ်အမိန့်စွန့်လွှတ်စရာအကြောင်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ပဲရစ်ဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်၏မူဘောင်အတွင်းသရုပ်ပြအသစ်စုဆောင်းခြင်း, ရှည်လျားသော chiffon နှင့်ပိုးဆင်မြန်း, ကျယ်ပြန့်ဘောင်းဘီ airy ပေးအပ်သည်။ စုဆောင်းခြင်း၏ဆောင်ပုဒ် - ထိုအချစ်ဇာတ်လမ်း, ခေတ်မီ, လွယ်ကူခြင်း။
လမ်းဖက်ရှင် - နွေဦး-နွေရာသီ 2014
ခေတ်မှီအကျီ - Fall 2015
ဖိနပ် - နွေရာသီ 2016
အလတ်စားဆံပင် 2016 ဘို့အမျိုးသမီးများခေါင်းဖီး - ကက်စကိတ်
Homeopathy - ဆေး
အသည်းရောင်ရမ်းခြင်း - ရောဂါလက္ခဏာ
ထုံး Blossom - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ
လိမ္မော်ရောင်ရေနံ - အလှကုန်နှင့်တိုင်းရင်းဆေးအတွက်အသုံးပြု
White က slipony - အဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်နှင့်မည်သို့ကြည့်ဖို့?
ယောက်ျားတစ်ယောက်စာပေးစာယူ excite မှဘယ်လိုနေသလဲ?
ပစ်ခတ်မှုကနေဓာတ်ပုံအစီရင်ခံစာ: ဘရစ္စဘိန်းကနေ "Thor Ragnarok"